Sergio Aguero oo shil gaari galay… (Sidee wax u dhaceen?) – Gool FM
(Manchester) 16 Okt 2019. Xiddiga reer Argentina ee Sergio Aguero ayaa galay shil gaari ah inta uu ku sii jeeday tababarkii maanta oo Arbaco ah ay kooxda Manchester City ugu diyaar garoobeysay kulanka ay kula ciyaari doonaan Crystal Palace horyaalka Premier League, laakiin nasiib wanaag wuxuu ka soo baxay gaariga isagoo aanan gaarin wax dhaawac ee halis ah.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Ingiriiska, Aguero wuxuu ku sugnaa wadada ka hor inta uusan ka lumin gacanta ku haynta gaarigiisa, taas oo sababtay in burbur kaddis ah uu ka soo gaarey dhanka hore ee middig gaarigiisa.
Sergio Aguero wax dhaawac ah ma uusan soo gaarin, mana uusan u baahanin inuu maro baaritaano caafimaad, waxaana isla markii goobta uu shilka ka dhacay soo gaaray booliska iyo gaariga ambalaaska si loo ogaado qasaaraha uu shilka geystay, laakiin ugu dambeyntii Aguero ayaa goobta shilka ka dhaqaaqay, si uu kaga qeyb galo tababarka si dabiici ah.
Goor dambe ayeey warbaahinta ku baahisay baraha bulshada burburka ka soo gaaray afka hore ee dhanka middig gaariga xiddiga kooxda Manchester City ee Sergio Aguero.
Tani ma ahan markii ugu horeysay uu Sergio Aguero uu galo shil gaari, iyadoo uu horey shil gaari uu galay uu dhaawac kaga soo gaaray magaalada Amsterdam ee dalka Hollan labo sano kahor.